ကားဝယ်ယူရန် JPC TRADE WEBSITE ကိုဝင်ရောက်လေ့လာနေစဉ် တွင်
JPC　MEMBERS　များကတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာပြီး လိုအပ်သည်များကို အပြည့်အဝ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့၍လိုချင်သော ကားကိုလေလံ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ကားများဆက်လက်ဝယ်ယူတင်သွင်း ပါကလည်း JPCTRADE နှင့်သာ ဆက်လက်လက်တွဲသွားပါမည်။ JPC MEMBERS များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
အလုပ်လုပ်ရာမှာလဲ စီပွားရေးထက် မိသားစု စိတ်ဓါတ် နှင့် �
ယခုဆိုလျှင် JPC နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေအောင် ကူညီခဲ့တာ၊ ကြိုးစားပေးခဲ့တာ၊ တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။ ယခုဆိုလျှင် JPC Trade ဟာမြန်မာပြည်မှာ လူသိအများဆုံးနှင့် အအောင်မြင်ဆုံး Company ဖြစ်နေပါပြီ။
Mr.Han Lin Htut
Actually, this is my first time buyingacar from Japan, but I had no difficulties because of your patiently explaining.
Now I received my car and I saw the car is in good condition. I got your help and I success the car importing now. If someone in Myanmar people sees this message, I would like to tell that try to buy the car from Japan easily by connecting with JPC.
JPC Trade နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်
JPC Trade မှာကားလေလံဆွဲရုံသက်သက်မဟုတ်ပဲ customer စိတ်တိုင်းကျလိုချင်တဲ့ကားအမျို းအစားရတဲ့အထိသေချာစွာဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်။ ဒါကြောင့် JPC Trade နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
Mr. Kyaw Htwe Lwin
တကယ်လို့များကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ယောက်က ကားလေလံဆွဲမယ်ဆိုရင် JPC ကိုပဲညွှန်းမှာပါ။ JPC မှာကားဝယ်ပြီးရင် after sale service ရတယ်။ Spare parts မှာလို့ရတယ်။ Workshop လည်းဝန်ဆောင်မှုကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်ကားလေလံဆွဲရင် JPC မှာပဲဝယ်မှာပါ။
MR. SI THU AUNG
Thanks for amazing purchase
I have received my Jaguar XKR and am very happy with it, went foracruise on Sunday. Many thanks Regards Tony
I want to thank you and the entire JPC fraternity for the excellent service offered.
I loved the way you informed me of every process. It is extra satisfying.
JPC Trade has beenavery important partner in my car importation business, they provide great service and I know my interests are safe with them, looking forward to more future business. God bless you!
I am very glad that I received my Isuzu exactly the way it was in the picture, thank